Wasiiro iyo Wasiiro Xigeeno ka Socda Dawlada Dhexe ee Itobiya oo ka Dagay Jijiga – Rasaasa News
Sideed  wasiir iyo saddex  wasiiro xigeen oo ka socda dawlada dhexe ee Itobiya, ayaa maanta gaadhay magaalada Jijiga ee xarunta Ismaamulka Somalida Itobiya [isi].
Waftiga ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Jijiga, waxaana garoonka ku soo dhaweeyey M/weynaha Ismaamulka Somalida Itobiya Cabdi Maxamuud Cumar.
Waftigan maanta soo gaadhay Jijiga, waxaa hogaaminaya R/w xigeenkii hore Addisu Lagese, waxaana ka mid ah wasiirka Arrimaha Federaalka Dr Shiferaw Tekelemariam, wasiirka Biyaha Alemayehu Tegenu, Wasiirka Waxbarashada Demeke Mekonnen, Wasiirka Arrimaha Bulshada Abdifatah Sheikh Abdullahi, Wasiirka Dhalinyarada Zenebu Tadesse, Wasiirka Ilaalinta Deegaanka Mekuria Haile, Wasiirka Hawlaha Guud Junedin Sado, iyo wasiirka beeraha Tefera Deribew iyo 3 wasiiro ku xigen oo aan la sheegin wasaarada ay ka socdaan.
Ujeedada waftiga ayaa lagu sheegay in uu yahay kula xisaabtanka dawlada degaanka Somalida waxqabadkii lixdii bilood ee tagtay iyo Qorshaha kobaca dhaqaale shanta sano ee bilaabatay hada.
Degaanka Somalida ayaa si xoog leh uga dambeeya degaanada kale ee dalka Itobiya dhinac walba, waxaana ka maqan degaanka Somalida kaabayaasha nolosha aas aasiga u ah dadweynaha ee waxqabadka dawladeed.
Dawlada Itobiya, waxay hore cudurdaar uga dhigan jirtay in dib u dhaca haysta degaanka Somalida ay ugu wacan tahay colaada ka jirta degaanka Somalida, arintaas oo maanta meesha ka baxday, ka dib kolkii ay heshiis dawladu la gashay labdii urur ee hore uga dagaalami jiray degaanka Somalida UWSLF iyo ONLF.
Waana markii ugu horaysay ee wasiiro tiradaas ah oo ka socda dawlada dhexe ay hal mar tagaan xarunta maamulka degaanka Somalida Itobiya, waxaana la filayaa in ayna dhaafidoonin Jijiga, in kasta oo ay abaar xun ka jirto degaanka Somalida Itobiya.
Maamulka degaanka Somalida ayaa ku xoonsan Jijiga, saddexdii biloodbana hal mar sameeyaan xisaabtan, laakiin masuuliyiinta degaanku ma booqdaan ama uma kuur galaan nolosha dadweynaha ku nool gabalada degaanka Somalida.
Si kastaba arintu ha ahaatee, maanta waxaa dawlada degaanka iyo dawlada dhexeba Itobiya indho waaweyn ku dhawraya ururadii nabada la galay dawlada, aqoonyahanka degaanka u dhashay, qurba joogta degaanka, guud ahaan dadweynaha Somalida Itobiya iyo aduun weynaha.
Kuwaas oo dhamaantood leh maanta way dhamaatay cudur daarkii dawlada dhexe Itobiya sugayna waxqabad dhab ah oo ka dhaca degaanka Somalida Itobiya.
Maxamed Macalin Miskiin [Seedi], oo la Sheegay in uu Baabuur ku Galay Dalka Koonfur Afrika